News 18 Nepal || भारतले कहिले ल्याउला कोरोनाविरुद्वको भ्याक्सिन ?
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भाइरसविरुद्वको भ्याक्सिनको व्यग्र प्रतिक्षा रहेको छ । कोरोना भाइरसले मानिसहरुमा शारीरिक र मानसिक तनाव थपिदिएको छ । संक्रमणले तीव्र रुप लिइरहेको बेला कोरोना भाइरसविरुद्वको भ्याक्सिन निर्माण गर्ने दौडमा करिब एक सय ७० भ्याक्सिन अग्रसर देखिएको छ । तर, भारतले निर्माण गरेको ‘कोभ्याक्सिन’ केही समय भित्रै बजारमा आउने भएको देखिन्छ ।
सामान्यतया कुनै पनि भ्याक्सिन विकासमा अत्याधिक समय लाग्ने गर्दछ । तर, कोरोना भाइरसको महामारीलाई छिटो परास्त गर्न औषधी कम्पनी र वैज्ञाकिहरु निरन्तर लागि परेका छन् । भारतका कम्पनि पनि भ्याक्सिनको विकासमा सक्रिय छन् । अगामी चार देखि पाँच महिना भित्र कोरोनाको भ्याक्सिन बचारमा आउने प्रतिबद्वता भारत वायोटेकले लिएको छ ।
कोरोना भाइरसविरुद्व लड्न कोभ्याक्सिनलाई प्रभावकारी मानिएको छ । भारत बायोटेक र इन्डियन कायन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चको संयुक्त साझेदारीमा भ्याक्सिन विकास भइरहेको छ । उक्त भ्याक्सिनले दोस्रो चरणको परिक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । कम्पनीले ड्रग रेगुलेटरसित तेस्रो परिक्षणको मान्यता कुरिरहेको जनाइएको छ ।
दोस्रो चरणको परिक्षण सुरक्षीत र प्रभावकारी देखिएपछि तेस्रो चरणमा परिक्षण लैजाने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । जनावरमा गरिएको परिक्षण साकारात्मक देखिएको छ । कोभ्याक्सिनले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालाई थप बल पुर्याउने गर्दछ । भ्याक्सिनलाई भारतको १२ वटा अस्पतालमा रहेका १८ देखि ५५ वर्षीय स्वयं सेवकहरुमा परिक्षण गरिएको थियो ।
भ्याक्सिन पछाडिको विज्ञान
कोभ्याक्सिन निष्क्रिय भ्याक्सिनको रुपमा रहेको जनाइएको छ । अर्थात भ्याक्सिनले भाइरसको प्याथोजेनलाई निष्कृय पार्न प्रभावकारी भुमिका खेल्ने छ । भ्याक्सिनले संक्रमणलाई न्युन गर्न मद्दत पुर्याउने छ । कोभ्याक्सिनलाई अलहाईड्रोक्सीकयुम सित दिने भनिएको छ । यसले संक्रमितको शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई विकास गर्ने र क्षमता अविवृद्वि गर्ने जनाइएको छ ।
तेस्रो परिक्षणमा भारत वायोटेकले १८ वर्ष भन्दामाथिको स्वयः सेवकमाथि प्रयोग गरिनेछ । परिक्षणमा २८ हजार पाँच सय स्वयः सेवक भाग लिने भएका छन् । परिक्षण भारतको दस राज्यमा हुने बताइएको छ । परिक्षण सफल भएमा भारत वायोटेकले ३० करोड भ्याक्सिन निर्माण गर्ने प्रतिबद्वता लिएको छ । भारत विश्वकै सर्वाधिक भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने देश रहेको छ । यसले कोरोना भाइरसविरुद्व लड्न निकै मद्दत पुर्याउने भएको छ ।
चुनौतीसामु ह्वाटमोर र क्यानको तीन सर्त
अस्ट्रेलियालाई पराजित गरेकोमा चौतर्फी प्रशंसा, रहानेलाई टेस्ट टिमको कप्तान !
पिएम कपको सेमिफाइनल समीकरण पुरा, को को भिड्नेछन् ?
‘जुन समूहले अध्यक्ष दिन्छ, त्यही समूहमा जान्छु’
भारतले दिएको कोभिसिल्ड खोप लगाएपछि देखिन्छ ‘साइड इफेक्ट’
ज्यान दिनुअघि नायिकाले भनेकी थिइन्, ‘म मर्न चाहन्छु’
नेकपाको विभाजन यसकारण देखिएन विधानसम्मत
प्रधानमन्त्री ओली किन एकाएक पशुपतिमा ‘संकल्प पूजा’ गर्न गए ?